Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny UK » Rioters anti-Vax mahery setra BBC London Studios
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
Tafio-drivotra mahery setra an'ny mpanohitra an'i Vax ao amin'ny BBC London Studios
Mino ireo mpanao fihetsiketsehana fa misy ifandraisany amin'ny orinasa mpamokatra fanafody sy ny haino aman-jery ny mpitondra ao amin'ny firenena mba hamitahana ny vahoaka anglisy momba ny aretina sy ny vaksininy.
Manafika ny BBC Studios any London ny mpanao fihetsiketsehana.
Nifandona tamin'ny polisy London ny mpanao fihetsiketsehana Anti-COVID Pass.
Manohitra ny fampidirana pasipaoro vaksiny sy fanaovana vaksin-jaza ny Londoners.
Vondron'ireo mpanao fihetsiketsehana fanoherana ny COVID mahery setra no nanafika ary nanandrana niditra an-tsehatra BBC studio ao amin'ny Ivotoerana Televiziona any London Andrefana.
Ny vahoaka marobe avy any Londres izay manohitra ny drafitry ny governemanta COVID-19 dia nifandona tamin'ny polisy, raha nanandrana nanafika ilay trano.
Ny fifandonana goavana teo am-baravaran'ny studio BBC dia natombok'ireo vavolombelona teo an-toerana. Nasehon'ny sary fa nisy polisy polisy Metropolitan am-polony nirohotra nanakana ireo mpanao fihetsiketsehana, izay toa te hanery hiditra.
Nihazakazaka tampoka i Tempers satria ireo mpikambana ao amin'ny vondrona mpanao fihetsiketsehana dia avy eo nijoro tamin'ny gadra vatan'olombelona teo alohan'ny polisy, nilaza tamin'ny mpiara-mitolona aminy mba hitazomana hatrany. Ny vahoaka, izay nitombo haingana dia maro, dia nanomboka nihorakoraka, "Menatra ianao!", Saingy tsy nanandrana niditra tao anatiny intsony. Ankizy vitsivitsy vitsivitsy nijoro tao aorinan'ny vahoaka no niara-nihira.
The Metropolitan Police dia nilaza fa "nahalala vondronà mpanao fihetsiketsehana" ivelan'ny studio BBC tao Wood Lane, White City.
"Tsy nisy ny fisamborana, fa misy manamboninahitra manatrika ary hanohy hanara-maso ny toe-javatra," hoy ny mpitondra tenin'ny polisy.
Nilaza ny BBC fa tsy hanome hevitra momba ny olana ara-piarovana. Lahatsary mivantana avy any an-toerana dia nampiseho ny olona tao anatin'ny tranobe nametraka latabatra teo akaikin'ny varavarana mihidy sasany, izay nalain'ny mpanao fihetsiketsehana ho fanakanana ireo vavahady fidirana.
Tsy atokisan'ny mpanao fihetsiketsehana ny fitantanan'ny governemanta ny areti-mandringana Covid-19 - indrindra ny fampidirana pasipaoro vaksinina sy ny fanaovana vaksin-jaza. Mino izy ireo fa miara-miasa amin'ireo orinasam-panafody sy haino aman-jery ny mpitondra ao amin'ny firenena hamitahana ny vahoaka anglisy momba ny aretina sy ireo vaksiny.
Toa ny fampielezam-peo avy amin'ny volam-bahoaka no niavaka ny BBC - izay, raha ny fihevitr'ireo mpanao fihetsiketsehana, dia natao ho an'ny governemanta fa tsy ny vahoaka anglisy.
Oktobra 20, 2021 ao amin'ny 13: 31
Pete currier hoy:
10 Aogositra 2021 amin'ny 21:07
Ny fampahalalana diso sy ny tsy fahalalana dia miparitaka amin'ny Internet kanefa mbola mandray ny zavatra novakiany ho marina ny olona. Toetra mampalahelo izay hitantsika ankehitriny.